WARBIXIN:10-ka Xiddig Ee Ugu Fiican Ee Ka Ciyaara No.10 Oo La Soo Saaray. – Kooxda.com
HomeWararka MaantaWARBIXIN:10-ka Xiddig Ee Ugu Fiican Ee Ka Ciyaara No.10 Oo La Soo Saaray.
WARBIXIN:10-ka Xiddig Ee Ugu Fiican Ee Ka Ciyaara No.10 Oo La Soo Saaray.
July 21, 2020 Abdiwali Adan Jamac Wararka Maanta, Warbixino 0
Kubadda cagta, lambarka 10-aad asal ahaan waa kubadsameeyaha kooxda ama xiddiga qadka dhexe ee weerarka – waana nin takhasuskiisu yahay in uu fursado u abuuro gooldhaliyaha.
Booskaas ayaa sanadihii ugu dambeeyay is badalayay iyada oo ayna kooxaha qaar lahayn doorkaas sababo la xidhiidha kala duwanaanshaha shaxaha ay tababaryaashu ku ciyaaraan shaxda uu Xiddiga No.10 ku soo boxo ayaa ah shaxda 4-4-2 oo ay isticmaalaan sida kooxaha Atletico Madrid halka sida shaxda 4-3-3 uuna boos ku lahayn No.10 maadama ay laba xiddig oo khadka dhexe oo daafaca ah ku ciyaarto.
Si kasta ha ahaatee shaxaha ay ku ciyaaraan kooxaha Man City, Man United, Bayern Munich iyo kooxo kale ayaa leh booska uu ka ciyaaro xiddiga No.10.
Hadaba maadama aan maalmihii ugu dambeeyay idiin soo wadnay xiddigaha ugu fiican boos kasta kubada cagta wakhti xaadirkan waxa aan idiin soo bandhigi doonaa xiddigaha ugu fiican booska No.10.
Ma jirto wax cusub oo laga odhan karo xiddiga Barcelona isaga oo sii wada in uu ka yaabsado adduunka maalinba maalinta ka dambaysa,
Xiddiga reer Argentine ayaan kaliya ahayn xiddiga ugu fiican adduunka laakiin sidoo kale ah xiddiga ugu haybada fiicankubada cagta taariikhdeeda Waxana uu wali sii wadaa in uu jabiyo rikoodhada isaga oo 33 jir ah.
Manchester City De Bruyne waa ciyaaryahanka ugu fiican Premier League xitaa wuxuu noqon karaa xiddiga ugu fiican adduunka kubada cagta.
Xiddiga reer Belguim ayaa leh xirfad aad u badan marka loo eego dhanka weerarka, De Bruyne ayaa mararka qaar ka ciyaara khadka dhexe ee caadiga ah halka uu mararka qaad ka ciyaaro khadka dhexe ee weerarka Waxana uu ilaa haatan dhaliyay 13 gool iyo 20 caawin xilli ciyaareedkan.
Xiddigo aad u yar ayaa leh mid la mid ah saamaynta uu Fernanades ku yeeshay Man United tan ilaa markii uu ku soo biiray kooxda Man United suuqii January.
Xiddiga reer Portugal ayaa leh gool dhalin cajiib ah iyo waliba caawin wareer ah isaga oo si lama filaan ah Man United kor ugu soo qaaday markii uu yimid kooxda isaga oo dhaliyay 7 gool iyo 7 caawin kaliya 11 kulan oo premier Legaue ah oo uu ciyaaray.
Xiddiga kooxda Bayer Leverkusen ayaa soo jiidanaya indhaha kooxaha waaweyn ee Yurub ka dib xilli ciyaareed cajiib ah oo uu ku soo bandhigay horyaalka Bundesliga.
Xiddiga reer Germany ayaa ka ciyaari kara dhawr boos oo weerarka ah isaga oo ka ciyaari kara weerarka tooska ah ee beenta ah iyo waliba No.10 oo ah booskiisa ugu fiican waxana uu xilliciayareedkan kooxdiisa u dhaliyay 37 gool tartamada oo dhan.
Waa xiddig kale oo reer Argentine oo ku jira Liiska waana xiddig u ciyaara koox aan caan ka ahayn adduunka ee Atalanta laakiin waxa uu is badaray adduunka kadib qaab ciyaareed cajiib ah oo uu soo bandhigay.
Xiddiga ayaa xilli ciyaareedkan kooxdiisa ka caawiyay in ay wacdaro ka dhigto champions League waxana uu dhaliyay 7 gool isaga oo caawiyay 18 gool waana boqorka caawinta ee Serie A-da.
6) Paulo Dybala:
Waa xiddig kale oo reer Argentine ah kana ciyaari kara weerarka laakiin booskiisa dabiiciga ah yahay kubad sameeye ama No.10 waana xiddig ka mid ah xiddigaha ugu Fiican Serie A-da isaga oo leh awood cajiib ah iyo halis gool waliba caawinta cajiib ku ah.
7) Thomas Muller:
Muller ayaa Bayern Munich iyo Germany ku bilowday shaxdooda 10 sano ka hor laakiin waxa uu u muuqdaa in uu haatan ku jiro wakhtigii ugu fiicnaa xirfadiisa ciyaared.
Xiddigan oo ak ciyaari kara weerarka tooska ah iyo waliba garbaha ayuu booskiisa dabiiciga ah yahay No.10 ama xiddiga ka daba ciyaara weeraryahanka waxana uu xilli ciyaareedkan dhaliyay 12 gool 22 caawin tartamada oo dhan.
8) Angel Di Maria:
Di Maria ayaa inta badan xirfadiisa ciayareed ku dhamaystay garabka isaga oo xitaa wakhtigiisii Real Madrid ka soo ciyaaray weerarka tooska ah.
Awooda xiddiga reer Argentine ee orodka, xirfadisa iyo waliba sida fudud ee uu baaska ku dhiibi karto ayaa ka dhigaysa xiddig ka ciyaari kara No.10 isaga oo saaxiibadiisa u dhiibi kara caawin badan.
9) Mikel Oyarzabal:
Sida xiddigo badan oo ku jira Liiskan Oyarzaball ayaa ah xiddig ka ciyaari kara dhawr sida ay sheegtay shabakada WhoScored.
Xiddiga ayaa inta badan ka ciyaara No.10 isaga oo kooxdiisa u dhaliyay kana caawiyay goolal xilli ciyaareedkan laakiin waxa uu ka ciyaari karaa weerarka iyo waliba boosaska garbaha.
10) Martin Odegaard:
Xiddiga reer Norway ayaa Real Madrid uga maqan 2 sano oo amaag ah waxana uu qaab ciyaareed cajiib ah ku soo bandhigaya xilli ciyaareedkan horyaalka La Liga.
Xiddiga 21 jirka ah ayaa ah xiddig haybad iyo mustaqbal ku leh kubada cagta waxana uu dhaliyay 4 gool iyo 6 caawin 28 kulan oo uu u ciyaaray kooxda Real Sociedad.
Sii Akhriso: Musharaxa Madaxtinimo Ee Dalka Maraykanka Oo Balan Qaad U Sameeyay Dadka Muslimiinta Ah Soona Xigta Xadiiskii Nabi Mohamed
Rio Ferdinand Oo Man United U Sheegay Halka Goolhaye Ee Ay Ula Soo Saxiixan Karaan Badalka David de Gea.
Pierre-Emerick Aubameyang Oo Go’aan Cusub Ka Gaadhay Mustaqbalkiisa Arsenal & Barcelona Oo Sabab U Ah